Rwanda: Bruno Le Maire waxay matali doontaa Faransiiska maalinta xusuusta ee xasuuqii Paris - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Rwanda: Bruno Le Maire oo matalaya Faransiiska oo lagu xusay xasuuqii Paris - JeuneAfrique.com
Rwanda, Bruno Le Maire matali doona France ee Paris xuska ee xasuuqa - JeuneAfrique.com
Ugu dambeyntii waa Bruno Le Maire, Wasiirka Dhaqaalaha iyo Maaliyadda, oo matalaya madaxa fulinta Faransiiska xafladda xusuusta ah ee lagu qabanayo Paris oo ay iska kaashadeen ururka Rwanda Ibuka.
Kigali, 7 Abriil, Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron wuxuu matalayaa Xildhibaan (LERM) Hervé Berville, oo xubin ka ah kooxda saaxiibtinimo ee Faransiiska-Rwanda-Burundi, intii lagu jiray xuskii 25e ee xasuuqa Tutsi.
Paris, isla maalintaas, waa Bruno Le Maire, Wasiirka Dhaqaalaha iyo Maaliyadda, kaas oo tagaya Magaca Madaxa Munaasabadda Munaasabadda lagu qabanayo Parc de Choisy, oo ah 13-keeda , oo ay hay'adda Ibuka ka badbaaday, iyadoo joogitaanka safaarada Rwanda ee Faransiiska, Jacques Kabale, iyo duqa magaalada Paris, Anne Hidalgo. Macluumaadka la xaqiijiyey Dhallinyarada Afrika by a source of diplomatic sources Rwanda iyo Elysee.
Subaxnimadii, 5 April, Emmanuel Macron wuxuu helay wafdi ka socda Ibuka Faransiis oo uu hogaaminayey madaxweynaha, taariikhyahan Marcel Kabanda.
Dhamaadka dhageysigan, Elysee waxay ku dhawaaqday inay ka kooban tahay guddi sagaal cilmi baarayaal ah iyo taariikhyahanno masuul ka ah baarista doorka Faransiiska ee Rwanda inta u dhaxeysa 1990 iyo 1994. Waa inay awood u yeeshaan inay galaan diiwaannada kala duwan ee Dawladda Faransiiska, ka hor inta aan la soo sheegin laba sano.
Natiijooyinka ka soo baxa madaxweynaha ee Ukraine